Will Smith ayaa laga mamnuucay abaalmarinta Oscar-ka 10 sano | Arrimaha Bulshada
Home English News hollywod News Will Smith ayaa laga mamnuucay abaalmarinta Oscar-ka 10 sano
Will Smith ayaa laga mamnuucay abaalmarinta Oscar-ka 10 sano
Sunday, April 10, 2022 English News , hollywod , News
Bulsha:- Akadeemiyada Filimada Hollywood-ka ayaa sheegtay Jimcihii in guddigeeda maamulku ay ka mamnuuceen Will Smith inuu ka soo qayb galo mid ka mid ah munaasabadaha, oo ay weheliso Abaalmarinta Akadeemiyada, muddo 10 sano ah ka dib markii uu ku dharbaaxay ku guuleystaha Jilaaga ugu Wanaagsan Chris Rock masraxa Abaalmarinta Akadeemiyada.
“Abaalmarinta Akadeemiyada 94-aad waxay ahayd inay noqoto dabbaaldegga dadka kala duwan ee kooxdayada kuwaas oo dhammeeyey shaqo aad u wanaagsan ka hor hadda 12 bilood,” David Rubin, oo ah madaxa Akademiga Dhaqdhaqaaqa Sawirka Farshaxanka iyo Sayniska, iyo Maamulaha Guud Don Hudson ayaa lagu sheegay warsaxaafadeed.
“Si kastaba ha ahaatee, waqtiyadan waxaa hadheeyay dhaqanka aan la aqbali karin iyo khatarta ah ee aan ogaanay in Mr. Smith uu u muuqdo masraxa.”
“Waan dejiyaa oo ixtiraamaa doorashada akadeemiyada,” Smith ayaa ku sheegay ogeysiis. Jilaaga ayaa iska casilay shaqada Akadeemiyada 1-dii Abriil, wuxuuna bilaabay hadallo uu ku raaligelinayo The Rock, Abaalmarinta Abaalmarinta, dadka la magacaabay iyo daawadayaasha.
Xafladdii telefishanka ee 27-kii Maarso, Smith wuxuu soo qaaday masraxa ka dib majaajiliiste Rock wuxuu sameeyay kaftan ku saabsan muuqaalka xaaska jilaaga, Jada Pinkett Smith, ka dib markii uu ku dhuftay Rock wajiga.
Wax ka yar hal saac ka dib, Smith wuxuu madasha ka jeediyay qudbad aad u ilmeysneysa isagoo ku aqbalay abaalmarinta jilaagii ugu weynaa booskiisa King Richard. Xaflada ka dib, waxa la arkayay isagoo qoob ka ciyaar ka ciyaaraya Oscars-ka ee sannadlaha ah ee Vainness Truthful.
Kaftan caadiga ah oo ku saabsan Pinkett Smith oo tixraacay filimkii 1997 “GI Jane” halkaas oo atariishada Demi Moore ay madaxeeda xiirtay. Ma cadda haddii Rock uu miyir qabo in ay haysato xaalad sababa timo lumis.